अझै असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढी « Everest Leaks
वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र कृपा र अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्स्टिच्युटद्वारा संयुक्तरुपमा सम्पन्न ‘नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतन’सम्बन्धी आज यहाँ सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाभन्दा असुरक्षित सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी भेटिएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१४ मा करिब १० लाख ४८ हजार प्रजनन उमेर समूह १५ देखि १९ वर्ष महिला गर्भवती भएका थिए । ती मध्ये करिब तीन लाख २३ हजार महिलाले मात्र गर्भपतन सेवा लिएका अध्ययनबाट देखिएको छ ।
अध्ययनमा प्रमुख अध्येता डा. महेश पुरीले थोरै बच्चाको चाहना राख्नु, शिक्षाको स्तर माथि हुनु, विवाह उमेर बढी हुनुजस्ता कारण मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अनिच्छित गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी रहेको जानकारी दिए ।
अर्कोतर्फ गर्भपतन सेवा सुरु भएपछि मातृ मृत्युदरमा समेत आमूल सुधार आएको छ । एक अध्ययनका अनुसार सन् १९९५ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५८० रहेकामा यो सङ्ख्या सन् २०१३ मा आइपुग्दा १९० मा झरेको थियो ।
कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङले अनिच्छित गर्भपतनलाई रोक्न परिवार नियोजनको पहुँच पु¥याउन, गर्भपतन सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. नरेशप्रताप केसीले स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट मात्र गर्भपतन गराउन जोड दिँदै आएको र गर्भपतन सेवालाई आगामी दिनमा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित : २८ माघ २०७३, शुक्रबार